Tic Tac Toe em emulator.online မှအွန်လိုင်းတွင်အခမဲ့ကစားပါ
နေကြပါပြီ tac တိုး tic-tac-toe ကိုဘယ်သူမှမကစားဖူးဘူး။ ၎င်းသည်မှတ်မိရန်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဝါသနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဂိမ်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်ခြင်းအပြင်သင်၏ယုတ္တိဗေဒစွမ်းရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
Tic Tac Toe: တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုကစားရမလဲ။ 🙂
ကစားရန် Blackjack အွန်လိုင်းအခမဲ့၊ ဤအအဆင့် -by-step ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ :
အဆင့် 1 ။ သင်နှစ်သက်သောဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ဂိမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ Emulator.online ။
အဆင့်2။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသပြီးပြီဖြစ်သည်။ သင်ရုံကိုနှိပ်ပါ ကစား နှင့်သင်ကစားနိုင်သည်၊ စက်ကိုဆန့်ကျင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကစားပါ ဘုတ်အဖွဲ့ရှိသင့်သည့်နှစ်ထပ်ကိန်းအရေအတွက်ကိုလည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
4 အဆင့်။ ရယူ ဒေါင်လိုက်၊ အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ထောင့်ဖြတ်ကျဉ်းမြောင်းအောင်လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့အုပ်ကြွပ်သုံးခုကို
များစွာသောဆိုဒ်များရှိသည် နေကြပါပြီ tac တိုး အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။ စက်ရုပ်နဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ကစားနိုင်တယ်။ Google တောင်မှအဲဒါကိုရရှိနိုင်တယ် အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်၊ စင်မြင့်ပေါ်တွင်“ tic-tac-toe” ကိုသာရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
Tic Tac Toe ဆိုတာဘာလဲ။ 🤓
နေကြပါပြီ tac တိုး ၎င်းသည်ကစားသမားများကိုအခက်အခဲများစွာမဖြစ်စေဘဲအလွယ်တကူသင်ယူနိုင်သည့်အလွန်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများဂိမ်းဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံတွင်နှစ်ပေါင်း ၃,၅၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိကျောက်တုံးများမှထွင်းထုထားသည့်အမှိုက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုအရိပ်လက္ခဏာများနှင့်အတူမူရင်းကိုမသိရှိရသေးပါ။
ဂိမ်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအို (၃) ခု (X) များကိုဖြောင့်တန်းတန်းစီထားရန်ဖြစ်သည်။
Tic Tac Toe ၏သမိုင်း 😄
ဒီဂိမ်းထဲမှာလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ထဲမှာ 19th ရာစု အမျိုးသမီးများသည်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်စကားပြောရန်ပန်းထိုးရန်စုရုံးလာကြသည်။ သို့သော်အကြီးအကဲများသည်သူတို့၏အားနည်းသောမျက်လုံးများကြောင့်ပန်း ထိုး၍ မရနိုင်တော့သောကြောင့်၎င်းအားအမည်ပြောင်းသောဂိမ်းအားဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည် Noughts နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် .
သို့သော်ဂိမ်း၏မူလအစအများကြီးအဟောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ မှာတူးဖော် Kurna ဗိမာနျ အဲဂုတ္တုပြည်၌ 14 ကနေချိန်းတွေ့ကရည်ညွှန်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ဘီစီရာစု ။ သို့သော်အခြားရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်များအရ Tic Tac Toe နှင့်အခြားသောအလားတူအပန်းဖြေမှုများကိုတီထွင်ခဲ့သည် လွတ်လပ်စွာကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိ ၎င်းတို့သည်ရှေးဟောင်းတရုတ်၊ ကိုလံဘီယာမတိုင်မီကအမေရိကနှင့်ရောမအင်ပါယာတို့တွင်အခြားသူများလည်းပါဝင်သည်။
1952 ခုနှစ်, EDSAC ကွန်ပျူတာဂိမ်း OXO Tic Tac Toe ဂိမ်းတွင်ကစားသူသည်ကွန်ပျူတာကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သတင်းများရှိသည့်ပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာသည်။
Tic Tac Toe စည်းကမ်းများ 📏
ဘုတ်အဖွဲ့က သုံးကော်လံအားဖြင့်သုံးတန်း matrix .
ကစားသမားနှစ် ဦး သည်တစ်ခုစီကိုအမှတ်တစ်ခုစီရွေးသည် စက်ဝိုင်း (အို) နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် (X) ။
ကစားသမားများတလှည့်စီကစားသည်။ အလှည့်နှုန်းတစ်လှည့် , ဘုတ်အဖွဲ့တခုတခုအပေါ်မှာအချည်းနှီးသောအာကာသပေါ်မှာ။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ စက်ဝိုင်းသုံးခု၊ ဒေါင်လိုက်အလျားလိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ချိန်တည်းဖြစ်စေဖြစ်နိုင်လျှင်ပြိုင်ဘက်အားနောက်တစ်ဆင့်အနိုင်ရခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိသောအခါ၊ အားလုံးသုံးသင်္ကေတများသောအားဖြင့်အထဲကဖြတ်ကူးကြသည်။
အကယ်၍ ကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကစားလျှင်၊ ဂိမ်းအမြဲတမ်းသရေကျ၌အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ဂိမ်းသည်မဲချခြင်း (သို့မဟုတ်“ အိုခြင်းရခြင်း”) ဖြစ်ရန်အလွန်အသုံးများသည်။
အောင်သူ ဖြေ။ ။ အကယ်လို့သင့်မှာတတန်းလုံးနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုလျှင်တတိယနေရာကိုထားပါ။
ပိတ်ဆို့ အကယ်၍ ပြိုင်ဘက်တစ်တန်းလုံးမှာအပိုင်း ၂ ပိုင်းရှိရင်သူ့ကိုတတိယနေရာမှာထားပါ။
တြိဂံ - သင်နည်းနှစ်နည်းဖြင့်အနိုင်ရနိုင်သောအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ
ဗလာထောင့် - အချည်းနှီးသောထောင့်၌ကစား။
ကစားသမားတစ် ဦး က X ကိုထောင့်တွင်နေရာချသည်ဆိုပါစို့။ ဤနည်းဗျူဟာသည်ပြိုင်ဘက်အားအမှားတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အကယ်၍ သူသည် O သို့မဟုတ်အလယ်ဗဟိုရှိအာကာသထဲတွင်နေရာချလျှင်သူဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
၂ - ပြိုင်ဘက်ကိုပိတ်ပါ
အကယ်၍ ပြိုင်ဘက်သည် O ကိုဗဟိုတွင်နေရာချလျှင်ပြိုင်ဘက်များအကြားကွက်လပ်သာရှိသောမျဉ်းပေါ်တွင် X ကိုထားရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပြိုင်ဘက်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးသင်၏အောင်ပွဲအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
သင်၏အနိုင်ရရှိရေးအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးပွားစေရန်သင်၏သင်္ကေတကိုမတူညီသောလိုင်းများပေါ်တွင်ထားရန်အမြဲတမ်းကောင်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Xs နှစ်ခုကိုအတန်းတစ်ခုသို့တန်းလိုက်လျှင်သင်၏ပြိုင်ဘက်သည်သင့်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ X ကိုအခြားလိုင်းများတွင်ဖြန့်ပါကသင်၏အနိုင်ရရှိမှုအခွင့်အလမ်းပိုများလာသည်။
လူသား Tic Tac Toe ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ကစားရန်ဖွင့်လှစ်သော၊ ထို့နောက် hula hoops ကိုစက္ကူ tic-tac-toe ဂိမ်းဘုတ်ကဲ့သို့အတန်းသုံးတန်းနှင့်အတန်းသုံးခုခွဲပါ။ hula ကွင်းဆက်များအကြားနေရာများလွန်းမထားပါနှင့်။
သင်ဟာကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိမ်တွင်းကစားနေတယ်ဆိုရင်၊ ဘုတ်အဖွဲ့လုပ်ရန်တိပ်ကိုသုံးပါ ။ ကွန်ကရစ်တွင်မျဉ်းများကိုမြေဖြူတွေသုံးပြီးဆွဲနိုင်သည်။
ဂိမ်းတွင်မည်သူမျှထိခိုက်နာကျင်ခြင်းမရှိစေရန်၊ အပေါက်များ၊ အန္တရာယ်ရှိသောအပျက်အစီးများ (ဥပမာကျိုးပဲ့သောဖန်ကဲ့သို့) သို့မဟုတ်အမြစ်များနှင့်ကျောက်များကဲ့သို့သောအခြားအန္တရာယ်အမျိုးအစားများအတွက်မြေပြင်ကိုကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင်ကစားသမားအမြောက်အများရှိပါကဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုထက် ပို၍ set up လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ အကောင်းဆုံးမှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီသည်ပါဝင်သူတစ် ဦး မှသုံး ဦး အကြားရှိသင့်သည်။
လူ့ tic-tac-toe ဂိမ်းကိုတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အသင်းများတွင်ကစားနိုင်သည်။ ဒုတိယကိစ္စတွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီတွင်အများဆုံးအဖွဲ့ဝင်သုံး ဦး စီရှိရမည်။ ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုစီတွင်ပြိုင်ဘက်အသင်းနှစ်သင်းရှိရမည်။
သငျသညျကစားသမားသုံး ဦး ထက်ပိုနှင့်အတူအသင်းများကိုခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီဂိမ်းနှေးကွေးခြင်းနှင့်အငယ်ကစားသမားပျင်းအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
အကြွေစေ့နှင့်ဒင်္ဂါးကိုမည်သူ ဦး စားပေးမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီအားကျောက်တုံး၊ စက္ကူနှင့်ကတ်ကြေးများဖြင့်စတင်မည့်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးကစားရမည့်ကစားသမားသည် X ကိုရမည်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအသင်းသည် O. ကိုရမည်ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေရန်, ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ဆုရရှိသူများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းယူကစားသမားကိုမေးပါ။
အသင်းတစ်ဖွဲ့သည်စတုရန်းသုံးကွက်အားဖြည့်နိုင်သည့်အထိကစားပါ။ အဖွဲ့တစ်ခုစီကိုအထည်အိတ်လေးလုံးပေးပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောရောင်စုံအိတ်များကို သုံး၍ X နှင့် O. ကိုခွဲခြားရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီသည်အနိုင်တစ်ခု (သို့) ဂိမ်းဆွဲခြင်းမပြီးမချင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုဘုတ်ပေါ်တွင်အိတ်တစ်လုံးထားရမည်။ အသင်းများတွင်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ထက်ပိုပါကအသင်းတစ်ခုစီမှအသင်းတစ်ဖွဲ့တည်းကိုတစ်ပြိုင်တည်းကစားစေပါ။